डिभिजन टू : क्यानडालाई हराए नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा, पराजित भए के हुन्छ? :: PahiloPost
Feb 16, 2019 | ४ फागुन २०७५
Feb 16, 2019 | ४ फागुन २०७५ Search
डिभिजन टू : क्यानडालाई हराए नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा, पराजित भए के हुन्छ?
13th February 2018 | १ फागुन २०७४
काठमाडौं: नामिबियामा भइरहेको आइसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन टू को अन्तिम राउण्डका खेल बाँकी रहँदा शीर्ष दुईमा पर्न चार टिम होडमा छन्। सोमबार भएको खेलमा पराजित भएपछि केन्या र ओमान भने एक खेलअघि नै शीर्ष दुईको होडबाट बाहिरिएका छन्।
अब बुधबार शीर्ष स्थानको क्यानडासँग दोस्रो स्थानको नेपालले खेल्दैछ र यो खेलको विजेता शीर्ष दुईमा रहने पक्का छ। ४ खेल खेल्दा समान ६ अंक जोडेको क्यानडा र नेपाल क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थानमा छ। नेपालको हकमा क्यानडालाई पराजित गर्न सके अर्को महिना जिम्वावेमा हुने क्वालिफायरमा स्थान पक्का हुनेछ। क्यानडाले जित हात पारे पनि त्यहि नै हुन्छ।
त्योभन्दा अगाडि आज अर्को एउटा महत्वपूर्ण खेल हुँदैछ नामिबिया र केन्याबीच। दोस्रो चरणको यो खेल दुई पटक वर्षाले रोकेपछि आज हुँदैछ। यस खेलमा नामिबिया विजयी भए नामिबियाले पनि नेपाल र क्यानडासमान ६ अंक जोड्नेछ। जसले शीर्ष दुईको होड थप रोमाञ्चक बनाउनेछ। यदी नामिबिया केन्यासँग पराजित भएमा भने समीकरण अर्कै बन्नेछ।
बुधबार नेपाल र क्यानडासँगै नामिबिया र युएई बीचको खेल पनि हुनेछ। यी चार टिम शीर्ष दुईको होडमा छन्।
यदी नामिबियाले अबको दुबै खेल जित्ने र नेपाल पराजित हुने हो भने नेपाल शीर्ष दुईमा पर्न असफल हुनेछ। नेपाल पराजित हुने र नामिबियाले आज केन्यासँग हारेर भोलि युएईलाई जितेमा पनि नेपाल र नामिबियाको अंक बराबरी हुनेछ र रनरेटको आधारमा शीर्ष दुईमा पर्ने टिमको छिनोफानो हुनेछ।
नामिबियाले दुबै खेल हार्ने र नेपाल पनि भोलि पराजित भए नेपाल र युएईको समान ६ अंक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा पनि रनरेट निर्णायक हुनेछ।
नेपालले क्यानडालाई पराजित गर्दा सिधै शीर्ष दुईमा स्थान पक्का हुनेछ अन्यता अन्य टिमको नतिजा र रनरेट निर्णायक हुनेछ।
डिभिजन टू को शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिम अर्को महिना हुने वान डे वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा छनोट हुनेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टिम डिभिजन टू मै रहनेछ र पाँचौ र छैटौँ हुने टिम डिभिजन थ्री मा झर्नेछ।
डिभिजन टू : क्यानडालाई हराए नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा, पराजित भए के हुन्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
जब आकाश खुल्यो : सधैँ नदेखिने काठमाडौँका सुन्दर १६ फोटो
सवारीसाधन चलाउनेले गल्ती गरे ट्राफिकलाई १५ हजारसम्म जरिवाना गराउने अधिकार, मोबाइल चलाए पनि कारबाही
प्रचण्डलाई ओलीका तीन झट्काः त्यसपछि दुई पाइलटको दुईतिर उडान!
कश्मिरमा भारतीय सैनिकमाथि आक्रमण, ४२ को मृत्यु : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा घटनाको निन्दा